लण्डन आउंदै एनआरएनका केन्द्रीय नेताहरु, १० अर्बको लगानी घोषणा हुने सम्भावना झिनो
यसअघि एनआरएनका अध्यक्ष, संरक्षकसहितका केन्द्रीय नेताहरुले लण्डनबाट १० अर्बको लगानी घोषणा गर्ने चर्चा चलेको थियो । आइसिसीका नेताहरुले त्यसको लागि तयारी पनि गरेका थिए । तर नेताहरु लण्डन आउने दिन नजिकिदै जांदा यसअघि भनिएजस्तै सो घोषणा यसपटक हुने सम्भावना भने टरेको बुझिएको छ ।
वियर पिउने बानी छ ? यस्ता छन् फाइदाहरू
एजेन्सी । साथीभाइसँग बसेर वियर पिउने बानी छ र लत बस्यो भनेर चिन्ता लागेको छ भने पिर नगर्नुस् । अव वियर पिउन तपाइँलाई अर्को बाहाना भेटिएको छ ।
के तपाईलाई पाइल्स छ ? जान्नुहाेस् एक महिनामै ठिक हुने अचुक उपाय
ओली–दाहाल ‘वान टू वान’ वार्ता सकियो, तीन एजेण्डामा घनीभूत छलफल
काठमाडौं, माघ ५ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको ‘वान टू वान’ वार्ता सकिएको छ । ओलीनिवास बालकोटमा भएको वार्तामा पार्टी एकता र नयाँ सरकार गठनसँग सम्बन्धित तीन वटा एजेण्डामा गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ ।
नेपालद्वारा बंगलादेश पराजित, दाेस्राे खेल जापानसँग
काठमाण्डौ, माघ ५ । छैठौं एसियन आप्रवासी फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले बंगादेशलाई २–० ले पराजित गरेको छ ।
टोकियो, माघ ५ । जापानको एक परिवारले आफ्ना आफन्तजनलाई उत्तर कोरियाले अपहरण गरेको दाबी गर्दै त्यसका विरुद्ध अदालत जाने बताएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा विवेकशील साझाले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति
काठमाण्डौ, माघ ५ । नेपाल–भारत सीमाको वीरगन्ज महानगरपालिका–१ स्थित छप्कैया क्षेत्रमा नेपालतर्फका स्थानीयवासीको ३० बिगाहभन्दा बढी जमिन मिसिएको विषयमा विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सलमान खानका भाई सोहेल काठमाडौँमा
काठमाडौँ । बलिउड नायक सलमान खानका भाइ एवं अभिनेता सोहेल खान काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड माघ १३ देखि दिउँसोमा पनि ६ घण्टा बन्द हुने
चितवन, माघ ५ । नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड माघ १३ गतेदेखि दिउँसोमा पनि ६ घण्टा बन्द हुने भएको छ ।
सुत्केरीकाे मृत्युपछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा ताेडफाेड
नेपालगन्ज, माघ ५ । लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै बिरामीका आफन्तले नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, कोहलपुरमा तोडफोड गरेका छन् ।
Page7of 3179